Admiral Qare : Burcad Badeedii waxaa Badashay Burcad Kaluun, ee wax halaga qabto. – Gedo Times
Admiral Qare : Burcad Badeedii waxaa Badashay Burcad Kaluun, ee wax halaga qabto.
29th April 2016 admin Wararka Maanta 0
Taliyihii hore ee Ciidamada Badda ee Soomaaliya Admiral Faarax Axmed Cumar (Faarax Qarre) oo hada ah Agaasimaha Hey’adda Cilmi baarista Badaha ayaa sheegay in dowlado fara badan ay si sharci darro ah ay badda Soomaaliya uga kaluumeysanayaan.
Admiral Faarax Qarre ayaa sheegay in Caalamka uusan dooneyn in la dhiso Ciidamada Badda Soomaaliya, si ay uga hortagaan kaluumeysiga sharci darada, isla markaana u sugaan amniga Xeebaha.
Waxaa uu sheegay in sida Caalamka ugu soo gurmaday la dagaalanka burcad badeedka, loo baahan yahay in loogu soo gurmado ka hortaga kaluumeysiga sharci darada ah.
Waxaa uu sheegay in hadii Ciidamada Badda la xoojin lahaa, qalabka loogu deeqi lahaa ay yaraan laheyd kaluumeysiga sharci darada, isla markaana markabkii aan wadan wax shati ah gacanta lagu soo dhigi lahaa.
Hey’ad ka faaloota kaluumeysiga nabdoon ayaa warbixin ay dhowaan soo saartay ku sheegtay in kaluumeysiga sharci darada ee ka socda Badda Soomaaliya sanadkii laga sameeyo boqol milyan oo dollar, iyadoo ka digtay in kaluumeysiga sharci darada inay dib u soo celiyaan falalkii burcad badeeda.
Aqriso:Axmed Madoobe iyo Farataag oo Adis Ababa ku Saxiixay Heshis ay Wada Gareen itobiyana ay Goob jog ka tahay.
XOG: Ciidamada Maamulka Gobolka Gedo oo xalay lagu weeraray Fariisimo ay kuleeyihiin Duleedka Degmada Baledxaawo.